Jumper စားဆင်ယင် – အဆိုပါ Tailoress
အမျိုးအစား: Jumper စားဆင်ယင်
Hood Jumper Dress သင်ခန်းစာ
မေ 17, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | အဝတ်အစား, Jumper စားဆင်ယင်, ထိပ်, tutorials, အမြိုးသမီးမြား
လှမ်း 1 ချုပ်မယ့်မှို အသုံးပြု. မဆိုချိန်ခွင်လျှာအမှတ်အသားများ marking အားလုံးအပိုင်းပိုင်းထွက် Cut. တစ်ဦးအလတ်စားအရွယ်အစားချုပ်အပေါ်တစ်ဦးကဘောအပ်ချုပ်စက်ကိုဆေးထိုးအပ်ကိုသုံးပါ. Begin by pinning and stitching the upper and lower edges of the glove pieces right sides together, and the top edges of the cuff, also right sides together. လှမ်း2Trim […]
မေ 15, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | အဝတ်အစား, Jumper စားဆင်ယင်, ထိပ်, tutorials, အမြိုးသမီးမြား
လှမ်း 1 မည်သည့်ချိန်ခွင်လျှာ marking အားလုံးအပိုင်းပိုင်းထွက် Cut သို့မဟုတ်အမှတ်အသားများဖြေလျှော့. ကချုပ်ရိုးဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေရာတိုင်းမှာ zig-zag ချုပ်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်ဒါဒါကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကကျိုးကြောင်းဆီလျော်လမ်းပိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်. Lay the front edge of the Sleeve armhole to the Front armhole, လက်ျာဘက်၌အတူတကွ. ယင်းချုပ်ရိုးစရိတ် pin နှင့်ချုပ်. […]